Xaalado wax laga baranayo | PUNSAA
Ka Qaybgalka iyo Saamaynta bulshada rayidka ah ee Qorshayaasha Horumarinta
Dalladdu waxay si firfircoon uga qayb qaadataa dadaalada horumarineed ee beesha caalamku ugu jirto horumarinta soomaaliya, si ay si wax ku ool ah saamayn ugu yeelato go’aamadda taabanaya xaaladaha siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale ee dadka Puntland. Dalladdu waxay horumarinaysaa isku xirka ururada bulshada rayidka ah iyo daneeyayaasha beesha caalamka si mashaariicda horumarineed ay u noqdaan kuwo ka turjumaya baahiyaha bulshada Puntland. Dalladdu waa xiriiriyaha bulshada rayidka ah iyo dowladda waxayna abaabushaa kulamo iyo wadatashiyo ballaaran oo looga arrinsanayo sidii lagu hagaajin lahaa mustaqbalka dalka Somalia. Dalladdu waxay si waxtar leh ugu biirisay ra’yiga ururada bulshada rayidka ah qorshayaasha horumarineed ee saamaynta tooska ah ku leh bulshada reer Puntland oo ay ka mid yihiin qorshaha horumarineed ee midowga yurub ugu tala galay dalka soomaaliya 2014–2020ka, dalladdu waxaa ay kaloo fursad u heshay inay abaabusho bulshada rayidka ah si ay ugu gudbiyaan qaban qaabiyayaaasha shirkii London arrimaha mudnaanta u leh bulshada reer Puntland si qoraal ah ayadoo tixraacaysa qorshaha horumarinta qaran ee Puntland sida Qorshaha shanta sano ee horumarinta Puntland 2007–2011, Qorshe sanadeedka 2008 iyo baahiyaha mudnaanta leh ee horumarinta hay’adaha dawliga ah ee Puntland 2012–2013, waxay dalladdu tixraac ugu samaysay dhamaan qoraaladaas si ay ugu biiriso aragti ku salaysan xog ogaalnimo qorshayaasha horumarinta soomaaliya ee caalamiga ah. Waxay dalladdu sidoo kale la talin siisay wasaaradda qorshaynta ee Puntland xiligii lagu guda jiray samaynta baahiyaha mudnaanta u leh dadka Puntland, sidaa si lamid ah waxay dalladdu qoraallo muhiim ah oo ay diyaariyeen ururada bulshada rayidka ah hordhigtay shirkii ka dhacay Brussels September 2013 ee loogu magac daray Higsiga Cusub ama New Deal.
Kulug lahaanshaha PUNSAA ee Siyaadda Saxaafadda
12kii December 2012, ayaa khilaaf ka dhex-qarxay Wasaaradda Warfaafinta Hiddaha iyo Dhaqanka Puntland (MoICCH) iyo Dalladda Saxaafadda Puntland (MAP) kaas oo salka ku hayey siyaasadda saxaafadda qabyo qoraalka ah, Wasiirka Warfaafinta Mudanne Mohamud Eided Dirir ayaa wuxuu unkay Siyaasad Saxaafeed oo cusub wuxuuse ku guul daraystay in uu ka qaybgeliyo daneeyayaasha siyaasadda saxaafadda, tani waxay horseeday khilaaf u dhexeeya Wasaaradda iyo MAP, PUNSAA ayaa dhexgashay xaaladan iyada oo qaadanaysa door dhexdhexaad nimo waxayna ku guulaysatay in ay xaliso khilaafkii u dhexeeyey Wasaaradda iyo MAP. Bulshada Rayidka ka ah gaar ahaan daneeyayaasha Siyaasadda Saxaafada oo ka faa’iidaysanaya Dalladda PUNSAA ayaa si baaxad leh wax ugu biiriyey unkidda iyo dhamaystirka siyaasadda saxaafadda, shir wadatashi ayaa daneeyayaasha Siyaasadda Saxaafadda loo qabtay 11kii iyo 12kii May 2013, waxaa ka qaybgalay 30 wakiilo bulsho rayid ah oo ka kala yimi dhamaan goboladda Puntland kuwaas oo kala matelayey Xarumaha Saxaafadda, Wariyayaasha Madax-banaan, Barlamaanka, Odayaasha Dhaqanka iyo Culimadda Diinata; Wasiirka MoICCH labadiisa ku xigeen, agaasimihiisa guud iyo Guddomiye ku xigeenka PUNSAA ayaa ka qaybgalay furayna shirka. PUNSAA waxay ku soo xirtay shirka khabiir hogaamiya fududeeyana wadatashiga Siyaasadda Saxaafadda qabyada ah ee Wasaaraddu unugtay iyada oo loola jeeday in shirka ay ka soo baxdo siyaasad la aqbali karo oo heer caalami ah, Shirka wadatashiga waxaa u jeedadiisu ahayd in dib u eegis lagu sameeyo Siyaasadda Saxaafadda ee qabyada ah laguna biiriyo talooyinka iyo soo jeedimaha daneeyayaasha Siyaasadda. Shirkan wadatashiga ah ee salka balaaran waxaa ka soo baxay Siyaasad Saxaafadeed Macno badan lana fahmi karo oo ay isla soo saareen Dawladda iyo Bulshda Rayidka ah ee Danaysa Siyaasadda Saxaafadda, Dawladdu waxay si xoogan u cadaysay in ay soo dhowaynayso aqbalaysona ka qaybgalka bulshada ee Siyaasadda gaar ahaan MAP iyo xarumaha saxaafadeed ee hoos yimaada si loo xaliyo ku qanac la’aanta Siyaadda Saxaafadda. Hanaankan Guusha ku dhamaaday wuxuu meesha ka saaray khilaafkii u dhexeeyey Wasaaradda iyo MAP wuxuuna u gogol xaaray mustaqbal iskaashi wanaagsan oo dhexmara Dawladda iyo PUNSAA, Si ka wanaagsan sidii hore, waxaa jira xiriir xoogan oo wadashaqayneed kaas oo u dhexeeya PUNSAA iyo Dawladda kaas oo looga sii faa’iidaysan karo xaalado badan oo bulshada rayid ka ahi qabto si loo sii wado saamaynta siyaasaddaha iyo ku guulaysiga horumarinta tayadda galaangalka.
Natiijada dhexdhexaadintan lagu guulaysatay waxay sababtay in xarumaha saxaafadu PUNSAA u aqoonsadaan PUNSAA Dallad bulsho rayid oo saamayn leh una istaagi karta xalinta xaaladaha ka horyimaada Bulshada Rayidka ah, waxayna abuurtay xiriir wanaagsan oo dawladda iyo PUNSAA u dhexeeya kaas oo ku dhisan iskaashi laba geesood ah kaas oo Dawladdu ku soo dhowaysay in PUNSAA ka qayb-gasho xalinta cabashooyinka Bulshada Rayidka ah. Xeerkii Saxaafada waa la gebo-gabeeyey waxaana ansixiyey Barlamaanka iyada oo wax kabedel xaalad cusub abuuray lagu sameeyey.
Ka qaybqaadashada PUNSAA ee Ansixinta Dastuurka
Dalladdu waxaa ay qaadatay door firfircoon xiligii ansixinta dastuurka Puntland, waxaa ay dalladdu abaabushay kulamo wada tashi iyo baahin dastuur, ka hor intii aan laguda gelin ansixinta dastuurka bishii April sannadii 2012ka; waxaa kulamadaas ka qayb galay kontan xubnood oo ka kala yimid gobolada Puntland guud ahaan. Muhiimadda kulamadani waxaa ay ahaayeen in bulshada lagula socodsiiyo dastuurka iyo ansixintiisa. Hanaankani waxaa uu xaqiijiyay ka qaybgalka bulshada rayidka ah ee barnaamijka dimuqraadiyaynta, waxaana uu u suurta geliyay ka qaybgalayaasha in ay talooyin u gudbiyaan guddiga ansixinta dastuurka. Waxaa ay Puntland ku haminayasay hayaan dimuqraadiyadeed, kaas oo ah kii ugu horeeyay noociisa lagasoo bilaabo xiligii la asaasay Puntland ee sanadii 1998. PUNSAA waxaa ay dhiirigelisay hanaanka dimuqraadiyaynta Puntland, sababtoo ah waxaan aaminsannahay in bulshada rayidka ahi xoojin karto maamulka iyo dawladnimada markii cod muhiim ah ku yeeshaan go’aamada taabanaya nolosha bulshada ayna dooran karaan hogaamiyayaashooda. Waxaa dalladdu baahisay dastuurka la ansixiyay ee Puntland ayadoo gaarsiisay degmooyinka iyo tuulooyinka si sare loogu qaado wacyiga bulshada ee dastuurka iyo arrimaha dimuqraadiyaynta, isla mar ahaantaana loo adkeeyo xiriirka bulshada iyo dawladda. waxyaabaha kasoo baxay kulamadaan waxaa ka mid ahaa in bulshadu u aragtay ansixinta dastuurka, talaabo horay loogu qaaday dhanka dimuqraadiyaynta Puntland. Si kastaba ha ahaatee, muran hareeyay hanaanka loo maray doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland ayaa hakad geliyay geedi socodkii dimuqraadiyaynta Puntland, waxaana dib loogu noqday qaabkii hore ee qabiilka. PUNSAA waxa ay daraasad kawada sameeyeen hay’adda ay jaalka yihiin ee Saferworld sababihii ku keenay fashilka hanaankii dimuqraadiyaynta Puntland, waxaana ay si wadajir ah uga soo saareen warbixin ku sallaysan cilmi baaris iyo daraasad qoto dheer. Warbixintu waxaa ay tibaaxday talooyin muhiim u ah dib u curinta hanaan dimuqraadiyadeed oo ay Puntland yeelato mustaqbalka.
Ololaha Wacyi Gelinta Dimuqraadiyeenta Gobolada Puntland
PUNSAA waxay abaabushay shirar watashi oo isku xigxiga kuwaas oo bulshada loogu wacyi gelinayey fakerka Dimuqraadiyada iyo Hanaanka Dimuqraadiyeynta Puntland oo lagu qabtay magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo, Bosaso iyo Badhan, waxaa ka qayb galay shirarkaas 200 oo qof kana kala socday dhamaan noocyada kala duwan ee Bulshada oo ay 88 dumar ahayeen, halka 112 rag ahaayeen. Tani waxay fursad siisay in bulshada lagu wargeliyo hanaanka dimuqraadiyeeynta sidoo kale la hubiyo ka mid ahaanshaha codka bulshada iyo in la ururiyo ra’ayigooda sida ugu haboon ee loo hirgalin karo hanaan diquqraadiyeed oo la jaanqaada diinooda iyo dhaqankooda. Shirarku waxay ahaayeen muhiim, waxayna fursad siiyeen ka qaybgalka muwaadiniinta waxayna fureen fursad wada hadal oo lagu hubinayo in codkoodii la tixgeliyey. Hadaba waxaa la’isku raacay in ay Bulshada Rayidka ahi si buuxda ugu lug lahaato hanaanka iyo in ay sii wado wacyi gelinta iyo barnaamijyada aqoonta madaniga ah ee muwaadiniinta si loo hubiyo in Bulshadu fahantay nuxurka dimuqraadiyenyta iyo faa’iidooyinkiisa.
Shirarku waxay Bulshada Rayidka ah ufidiyeen madal ay kaga qaybgalaan hanaanka dimuqraadiyeynta, waxay Bulshadu hoosta ka xariiqeen caqabadaha hortaagan hanaanka iyagoo sidoo kale soo bandhigay talooyin iyo xalal kuwaas oo kadib lala wadaagay Dawladda. PUNSAA waxay horumarisay kaqaybgalka Bulshada ee hanaanka doorashooyinka iyadoo siinaysa fursad ay kula socdaan marxaladii abuuridda Ururada Siyaasadda iyo sidoo kale in ay siiso xog xiliyeysan, sax ah oo ku aadan hanaanka doorashooyinka. PUNSAA waxay xogta hanaanka dimuqraadiyeeynta la wadaagtay guud ahaan Bulshowaynta reer Puntland oo ay ka midyihiin xubnaha golaha guud ee Dalladda bulshada rayidka ah, macalimiinta jaamacadaha, ardayda, odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, ururada aan dawliga ahayn, dadka la hayb-sooco iyo wakiilo qurbo joogta matelayey.
Goob-Joogayaasha Maxaliga ah
Qorshe lagu hubinayo doorasho hufan iyo in la horumariyo doorasho xor iyo xalaal ah, PUNSAA waxay u tabobartay goobjoogayaal maxali ah doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland. Doorka goobjoogayaashu wuxuu ahaa in ay kormeeraan doorashadii la joojiyey, tan waxaa lagu gaaray ka qaybgelinta bulshada rayidka ah iyo in la aas-aaso guddi isku dubaridid. Guddigu wuxuu caawimayey goob-joogayaasha maxaliga ah iyo ururinta xogaha goobjoogineed. Guddigu wuxuu ka koobnaa todoba xubnood oo qadarin ku dhexleh bulshada dhexdeeda lagana soo xulay qaybaha kala duwan ee Bulshada, waxaana guddigu abaabuley shirar dhawr ah oo ay la yeesheen Guddigii ku meelgaarka ahaa ee Doorashooyinta (TPEC), Guddigii dabagalka doorashooyinka (election monitoring Board) iyo ururadii kala duwanaa ee siyaasada is ay ugu sharaxaan goobjoogayaasha maxaliga ah ayna u horumariyaan xiriirka u dhexeeya una abuuraan aaminaad ku aadan warbixnta goobjoogayaasha maxaliga ah. Intii lagu guda jiray May 2013, TPEC waxay PUNSAA la saxiixday heshiis is afgarad kaas oo damaanad qaadayey xuquuqda ay PUNSAA u leedahay in ay fuliso hawlgalka goobjooganimada doorashooyinka si madax-banaan, dhexdhexaad ah oo wakhtiyeysan, heshiis ayaa lagu gaaray in TPEC u sharciyeso PUNSAA goobjoogayaasha maxaliga ah iyo in TPEC la siiyo warbixinta goob-joogayaasha oo horudhac ah. PUNSAA waxay ka faa’iidaysatay khibradda lataliye ay Saferworld u kiraysay si uu u tabo-baro afar tabobare tabobarayaal (ToTs) kuwaas oo lagu batabobaray goob-jooganimada, liiska hubinta (checklist) ga, iyo habraca maalinka doorashada. Tababarayaashu waxay tabobareen 60 goobjooge oo 50 ka mid ah laga keenay gobolada kala duwan ee Puntland, 10na laga keenay Koonfurta iyo Bartamaha Somalia iyo 8da wakiilo goboleedada PUNSAA. Islamarkiiba Ururada Siyaasadda iyo daneeyayaasha kala duwan ee hanaanka doorashoonku waxay PUNSAA u aqoonsadeen Dallad dhexdhexaad ah oo matali karta Bulshada Rayidka ah ee Puntland lehna tayo ay ku dhexdhexaadiso khilaafyo siyaasadeed oo murugsan. Intaa kadib, Dawladu waxay joojisay Doorashooyinkii Golayaasha Deegaamada ee Qorshaysnaa si looga baaqsado shaqaaqooyin iyo khilaaf ka badan intii dhacday oo wadanka soo wajaha. Joojinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ka dib, Guddiga kormeerka Goobjoogayaashu waxay shir ugu yeereen daneeyashaasa Hanaanka doorashooyinka ee Bulshada Rayidka ah si ay uga wada xaajoodaan doorashadii la joojiyey iyo saamaynteeda mustaqbal ee hanaanka dimuqraadiyeynta Puntland. Kadib guddigu waxay soo saareen warsaxaafadeed lagu taageerayo go’aankii dawladdu ku joojisay doorashooinka waxayna shaaciyeey aragtida iyo talooyinka Bulshada Rayidka ah ee mustaqbalka hanaanka doorashooyinka Puntland.
Asaasidda Guddiga Iskuxirka Goob-Joogayaasha Maxaliga ah
Waax ka mid diyaarinta hawlgalka goobjoognimo maxali ah oo hufan ayaa waxay ahayd aasaasida guddiga isuku xirka iyo kormeerka oo ka koobnaa todoba xubnood oo dhexdeeda, lagana soo xulay xirfad layda, saxaafada, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada iyo haweenka iyada oo loo eegay sumcada ay ku leeyihiin bulshada dhexleeda iyo dhexdhexaad nimadooda ku aadan daneeyayaasha hanaanka doorashooyinka Golayaasha Deegaanka
Puntland; Guddiga waxaa loo asaasay si ay u noqdaan wejiga siyaasadeed ee hawlgalka goobjooginimada iyo in ay la kulmaan Daneeyashaada hanaanka dooyashooyinka furaha u ah, sida Dawladda, Guddiga Doorashooyinka ku meelgaarka ah, Ururada Siyaasadda, Guddiga Dabagalka Doorashooyinka iyo Guddiga Hagayaasha Dimuqraadiyeeynta si ay u hogaamiyaan guud ahaan hawlgalka goobjoogidda maxaliga ah. Intii Guddigu Shaqadooda ku gudda jireen waxay isku dubarideen, qabteenna shirar isku xigxiga oo ay la yeesheen, Guddiga Doorashooyinka ku meelgaarka ah, Uruada Siyaasadda, Guddiga Dabagalka Doorashooyinka, wakiilka UNSOM ee Somalia Mudane Nicholas Kay waxayna qabteen shir saxaafadeed ay diiradda ku saareen doorashadii la joojiyey iyo mustaqbalka hanaanka dimuqraadiyeynta Puntland.
Hanaanka Furashada Ururada Siyaasadda
PUNSAA waxay shir wadatashi u abaabushay Bulshada Rayidka ah iyo Mucaaradka Dawladda si ay u falanqeeyaan una iftiimiyaan caqabadaha curyaaminaya ee ka hortaagan in bulshadu furato Ururada Siyaasadda, kadibna lagu qanciyo Dawladda in ay beegsato xal u helida caqabadahaas iyo in hanaanka laga dhigo mid si buuxda looga wada qaybgalo oo isl xisaabtan leh. Shirkan wadatashiga ahi wuxuu yimi markii ay dhowaatay xiligii ay ku ekayd furashada Ururada Siyaasaddu iyada oo aysan jirin cid diwaan gashatay furashada urur siyaasadeed, waxaa kale oo jirtay kutiri-kuteen shacabku isla dhexmarayeen oo sheegaysay in ay jiraan caqabado dadku u arkaan in ay sabab u yihiin furasho la’aanta ururada siyaasadda. Shirku wuxuu kulmiyey 66 xubnood oo wakiilada bulshada rayidka iyo mucaarad iskugu jira, kuwaas oo la iskga keenay daafaha Puntland (Ururada aan Dawliga ahayn, Shabakadaha Dumarka iyo Dhalinyarada, Saxaafada, Odayaasha Dhaqanka Puntland, Ganacsatada, Xirfadlayda iyo Qareennada) waxaana laga qaybgeliyey xubno ka mid ah Guddigii Kumeelgaarka ee Doorashooyinka si ay ka qayb galayaasha ugu jeediyaan shuruucda doorashooyinka iyo qorshe fulineedka doorashooyinka si ka qaybgalayaasha loola socodsiiyo hanaanka doorashooyinka. Gabo-gabadii labo maalmood oo wada xaajood qotodheer laga yeeshay xaalada, ka qayb-galayaashii shirku waxay soo saareen, caqabadaha curyaaminaya furashada Ururada Siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen waxkhtiga furashada Urarada loo qoondeeyey oo aad u koobnaa, la’aanshaha Maxkamad Dastuuri ah, faafreeb iyo xanibaado saaranaa xoriyautul qawlka iyo xoriyada saxaafada, yaraanshaha wacyiga bulshada ee nidaamka axsaabta badan iyo xuquuqda iyo waajibaarka Dastuuriga ah ee Dadwaynaha. Intaa Kadib, PUNSAA waxay u qareentay in Dawladdu beegsato xal u helidda dhibaatooyinka xagaldaacinaya hanaanka, waxayna Guddiga Doorashooyinka ee kumeelgaarka ah ku qancisay in ay kordhiyaan wakhtiga loo qoondeeyey furashada Ururada Siyaasadda, isla mar ahaantaana waxayna Dawladda ugu baaqeen in ay abuurto hab lagu ilaaliyo hanaanka oo ay ku jirto dhisidda Maxakamad Dastuuri ah si loo soo celiyo kalsoonida bulshada ee ku aadan hanaanka.
Daraasadda Sababaha Ka dambeeyey Fashilkii ku yimi
Doorashooyinkii Golayaasha Deegaanka Puntland
Joojintii Doorashada Goloyaasha Deegaanka kadib PUNSAA waxay qabatay Daraasad loogu magacaabay “Puntland at the Polls” iyada oo taageero xirfadeed iyo mid maaliyadeed ka helaysa SaferWorld, si ay u baarto sababahii ka dambeeyey fashilkii ku yimi qabsoomida doorashada Golayaasha Deegaanka. Bulshada Caalamku waxay taageedhay sidii loo horumarin lahaa Dawladd loodhanyahay iyo hanaan maamul wanaag ee Puntland ka hirgala iyo Somalia guud ahaan. Diyaarinta Daraasadda waxaa loo xilsaaray Guddi Bulshada Rayidka ah oo ka kooban 17 xubnood si ay gacan uga siiyaan horena ugu sii wadaan wadaxaajoodyada mustaqbalka ee dimuqraadiyada Puntland. Dib u eegis qoraal ayaa lagu sameeyey Dastuurka, Xeerarkii doorashada, shir saxaafadeedyadii iyo warbixinihii hanaanka doorashada, waraysi qof kali ah iyo mid kooxee ayaa la sameeyey, 170 qof oo 68 dumar yihiin ayaa ka qaybgalay koox hawleedyada lagu qabtay Garowe, Bosaso, Qardho iyo Galkacyo oo ay wakiilada bulshada ee Gobolada Sool, Sanaag, Ayn and Haylan ka qaybgaleen, waraysiyo qof-qof ah ayaa lala yeeshay xubno ka tirsan Guddigii Doorashooyinka ee kumeelgaarka ahaa, Dad u dhaqdhaqaaqa Bulshada Rayid ka ah, Ururada aan Dawliga ahayn, wakiilo matelayey Urarada Siyaasadda, ciidamada, Haweenka, Odayaasha Dhaqanka iyo waraysi lala yeeshay beesha Caalamka oo lagu qabtay Nairobi intii lagu guda jiray February iyo March 2014. PUNSAA waxay shaacisay warbixintii Daraasadii “Puntland at the Polls” 29th June 2014, xafladda shaacinta warbixinta waxaa ka soo qaybgalay afartan iyo labo qof oo ay ku jiraan, Wasiirka Dastuurka, Dimuqraadiyeynta iyo arimaha Federalka, Wasiir kuxigeenka Waraaradda arimaha Guddaha iyo Dawladaha Hoose, Wasiirka Beeraha iyo Waraabka, Madaxa Xafiiska UNSOM ee Puntland, Gudoomiyihii Hore ee TPEC, Guddoomiyihii Urur Siyaasadeedka UDAD, hay’ado caalami ah iyo kuwo maxali ah, Saxaafada iyo Xubno Bulshada Rayidka ah oo muctarif ah. Wasiirka Dastuurka, Dimuqraadiyeynta iyo arimaha Federalka Marwo, Sahro ayaa waxay cabirtay dareenkeeda sida ay dadka Puntland ugu heelan yihiin in ay ka gudbaan habka dawli ee ku salaysan qabiil wax ku qaybsiga una gudbaan nidaam dimuqraadi ah (Hal Qof iyo Hal Cod) taas oo ah himilada dadka reer Puntland oo dhan in ay arkaan dawlad la doortay oo lala xisaabtami karo, gaarsiisana dadkeeda adeegyada aasaasiga ah. Wasiirku waxay hadal keeda ku soo gebo-gabaysay “maxsuulka daraasadani way cadahay waxayna muujinaysaa wixii khaldamay intii lagu guda jiray isku daygii u horeeyey ee hanaan dimuqraadiynta Puntalnd, waxay sidoo kale soo bandhigaysaa talooyin cad-cad oo fulintoodu baajin karto in khaladaadkii hore soo noqdaan mar kale, waan hubaa in Wasaaradayda iyo dhamaan dadka Puntalnd ka fa’iidi doonaan daraasadaan” uga dambayntii waxay Wasiirku PUNSAA iyo SaferWarld ku bogaadisay dadaalka ay geliyeen daraasadaan. PUNSAA waxay u qaybisay warbixinta Daraasada ka qaybgalayaashii shirka iyo guud ahaan daneeyayaasha, waxayna si kooban shirka uga soo jeedisay sababihii furaha u ahaa in ay fashilanto qorshihii doorashada Golayaasha Deegaanku iyo talooyin ku aadan Dawlada, Bulshada Rayidka ah iyo Beesha Caalanka.
Ka Qayb Qaadashada Haweenka Arrimaha Siyaasadda iyo Hnaanka Dawliga ah
Dalladdu waxay u istaagtay abaabulka iyo jihaynta kaynaanka haween weynaha Puntland si ay ugu istaagaan xuquuqaha loo baneeyay iyo in ay hilaadiyaan tubtii ay ku gaari lahaayeen himiladooda ka qayb galka siyaasadda iyo maamulka. Waxay dalladdu kaashatay dhaq dhaqaaqa haweenka Puntland ee lamagac baxay Tala-Wadaag si laysugu keeno 55 xubnood oo haween ah oo ka kala yimid dhamaan daafaha Puntland si ay u mideeyaan codka haweenka, gaar ahaan xilligii doorashada Puntland ay socotay wakhtigaas oo la filayay isbaddal ka dhaca dhamaan maamulka Puntland, isbadalkaas oo haweenka siin doona fursad cusub una furi doona bog cusub taariikhda haweenka Puntland. Waxay haweenku iska dhex xuleen guddi sagaal xubnood ka kooban oo si fir fircoon ugu qareema ka qayb gelinta haweenka talada go’aan gaarista iyo maamulka dawliga ah, waxayna wada hadallo la qaateen dhamaan qaybihii muhiimka u ahaa doorashadii Puntland xiligii ay socotay oo ay ugu horeeyaan Isimada Puntland iyo Murashaxiintii doorashada ayagoo ugu danbayntii baaq saxaafadeed soo saaray ay ku dalbadeen xaqqooda masiiriga ah iyo in ay xubno ka helaan dhamaan qaybaha dawladda sida baarlamaanka, golaha xukuumadda, golayaasha deegaanka, garsoorka iyo agaasinka madaxa banaan.
Tayeeynta Dhalinyarada ee ka Qaybgalka Siyaasadda
Qayb ka mid ah dadaaldeeda taynta Bulshada Rayidka ah ayaa PUNSAA ugu qareentay ka qayb-galaka dhalinyarada ee arimaha siyaasada iyo go’aan gaarista. 31st December 2013, PUNSAA waxay u qabatay aqoon is weydaarsi dalladaha dhalin-yarada Puntland si ay u xoojiso isku xirka, wada shaqaynta iyo xog is waydaarsiga u dhexeeya dhallinyarada, uguna fidiso dhalinyarada madal wada hadal, khibrad wadaag, feker iswaydaarsi iyo in ay ururiyaan wixii ay mudnaanta siinayaan, ay qoraan arji (petition) ugana raadiyaan taageero musharixiinta madaxwayne ee u cad-cad; wadadadna ugu xaaraan sidii lagu dhisi lahaa daladda dhalinyarad heer Qaran. Intii aqoon is weydaarsigu socday, dhalinyaradu waxay muhiimada siiyeen in loo qareemo ka qayb-galka dhalinyarada ee siyaasada iyo go’aan gaarista, dhismaha xarumo dhalinyaro ee Gobalada Puntland, fulinta siyaasadda dhalinyarada Puntland iyo in dakhliga dawladda looga qoondeeyo miisaaniyad dalladda dhalinyarada si ay si hufana waajibkeeda u gudato. PUNSAA waxay fududaysay in dhalinyaradu la kulmaan murashixiinta madaxwayne ee u cad-cad oo ay ka mid ahaayeen, Dr. Abdirahman Mohamed Farole, Prof, Abdiweli Mohamed Ali Gas, Mohamed Abdinur iyo Ali Haji Warsame si ay uga raadsadaan taageero dalabkooda, badi murashixiinta kor ku xusani oo uu ku jiro Madaxwayne Abdaweli ayaa saxiixay codsiga dhallinyarada, balan qaadayna in ay fulinayaan dalabka dhalinyarada hadii la doorto.
Ugu dambayntii dhalinyardu waxay soo saareen shir-saxaafadeed ay ugu hambalyeeyeen Madaxwaynaha, kuxigeenka, Gudoomiyaha iyo xubnaha Barlamaanka, waxayna ugu baaqeen madaxwaynaha in uu fuliyo balan qaadkii uu dhalinyarada u sameeyey intii uu ku guda jiray ololaha doorashada waxay Puntland u rajeeyeen Nabad, Horumar iyo Barwaaqo.